Soomaaliya: fashilka siyaasada dibada ee Kenya. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Wararka Soomaaliya: fashilka siyaasada dibada ee Kenya.
Soomaaliya: fashilka siyaasada dibada ee Kenya.
magalka waxaa Al jasiira News English ku daawacay wariye Abdullahiby Cabdullaahi Boru Halakhe
Khaladaadka siyaasadeed ee waaweyn ee dibedda Kenya waxay sameysay hanjabaad ah inay daahfurto xiriirka ay la leedahay Soomaaliya oo ay khatar ku tahay ammaankeeda.
Markii ay xornimada qaadatay 1963 iyo dagaalkii qaboobaa oo dhan, Kenya waxay isku dayday inay ka fogaato halganka gudaha iyo dibaddiisa ee geeska . In kasta oo Itoobiya ay xulafadeeda la midowday USSR iyo Cuba, Soomaaliya waxay la midowday Maraykanka iyo Tansaaniya oo noqotay marinka caqliga u leh dunida saddexaad, Kenya waxay sii waday dhexdhexaadnimo wanaagsan iyo siyaasad wax-ka-qabasho ah.
Daniel Moi, madaxweynaha labaad ee dalka kadib xornimadiisa, wuxuu raadinayay inuu ka daboolo Kenya dhibaatada ka imaaneysa gobolka iyada oo la ilaalinayo siyaasad shisheeye oo ah aas aaska fikirka ah – asaga oo aan saaxiib ahayn ama cadowga awoodaha gobolka iyo kan caalamiga ah.
Moi wuxuu sidoo kale qaatay khilaafaadka dhexdhexaadin ee gobolka wuxuuna ka dhigay astaamaha ugu weyn ee diblomaasiyadda Kenya kaas oo soconayey xitaa dhammaadkii Dagaalkii Qaboobaa. Intii lagu guda jiray madaxtinimadiisa, Kenya waxay noqotay goob loogu tala galay wadahadalada nabadeed ee u dhexeeya dhinacyada dagaallamaya ee Suudaan, Soomaaliya, iyo Uganda.
Heshiisyo kala duwan ayaa laga wada hadlay oo lagu soo gabagabeeyey magaalada Nairobi, oo ay ka mid yihiin heshiiskii nabadeed ee 1985 ee u dhexeeyey dawladda Ugandha ee Tito Okello iyo Ciidanka Qaranka ee Resistance Army (NRA), koox fallaago ah oo uu hoggaaminayey Yoweri Museveni iyo heshiiskii nabadeed ee 2005 ee dhexmaray dawladda Suudaan iyo mucaaradka koonfurta. kaas oo soo afjaray dagaalkii sokeeye ee muddada dheer socday ee Afrika.
Kenya waxay sidoo kale door muhiim ah ka qaadatay dhexdhexaadinta khilaafaadka Soomaaliya, martigelinta wadahadallada iyo saxiixa heshiiskii horseeday abuuritaanka Dawladda Ku-meel-gaarka ah (TFG) 2004.
Istaraatiijiyaddan kaliya ma hubinayso in arrimaha gudaha ee Kenya ay khalkhal gelisay horumarka gobolka laakiin waxay sidoo kale heshay sumcad diblomaasiyadeed oo gobolka ka jirta.
Maanta, labadan ayaa safka ugu jira maxaa yeelay khaladaad soo noqnoqda oo ay Kenya ka sameyneyso siyaasadeeda ku wajahan Soomaaliya. Joogitaanka millatariga Kenya ee dhulka Soomaaliya wuxuu galay sannadkiisii ​​sagaalaad, kaas oo hadda isku buuq ka galay arrimaha gudaha ee Soomaaliya kuna dhiirrigeliyay dagaallo badan oo al-Shabab ka gaystaan ​​gudaha Kenya. Mowqifka Kenya ee caqabadda ku ah muranka badda ee ay la leedahay Soomaaliya ayaa sidoo kale ku hanjabay inay tirtirayso sumcadeeda caalamiga ah.
Laga soo bilaabo faragelinta ilaa shaqada
Tobannaan sano, xiriirka laba geesoodka ah ee u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya wuxuu ahaa mid diiran oo xiriir ah. Laakiin sanadkii 2011, dawladda Kenya waxay go’aansatay inay ciidan u dirto deriskeeda, taas oo tan iyo xilligaas ahayd isha ku haynta khilaafka u dhexeeya Nairobi iyo Muqdisho.
Faragalinta Kenya ee gudaha Soomaaliya waxay la jaan qaadaya himilada “dagaalka argagaxisada” ee uu bilaabay Mareykanka 2001. Xirmada faragelinta sidii howlgalka “la-dagaallanka argagixisada” ayaa si toos ah u dammaanad qaadaya taageerada gudaha iyo xasaanadda caalamiga ah ee ku xadgudubka xuquuqda aadanaha.
Cadeynta rasmiga ah ee ka dhalatay faragalinta militariga ayaa ahayd daba-gal ay ku sameeyeen xubno ka tirsan Al-shabaab oo la sheegay inay afduubteen shaqaale samafal oo ku sugnaa waqooyiga Kenya isla markaana afduubay dalxiisayaal xeebta ku sugnaa.
Waxqabadka ayaa tan iyo markii uu u beddelay meheradda. Waqtigaan la joogo, waxaa jira inka badan 3,600 oo ciidamada Kenya ah gudaha Soomaaliya, kuwaas oo ugu horeyn la geeyo gobolka koonfurta Soomaaliya ee Jubaland.
Sideedii sano ee la soo dhaafay, ciidamada Kenya waxaa lagu eedeeyay inay galeen xad gudubyo kala duwan oo xuquuqul insaanka ka dhan ah shacabka iyo inay ku lug lahaayeen howlo tahriibin sharci darro ah. Dowladda Soomaaliya ayaa codsatay in ciidamada Kenya ay baxaan, laakiin ma aysan la socon wax dadaal ah oo culus oo ah sidii ay u eryi lahaayeen, iyada oo la siiyay awood xadidan oo ay ku siiso amniga.
Isla mar ahaantaana, joogitaanka millatariga Kenya wax yar kama uusan qabin in laga ilaaliyo Kenya weerarada al-Shabab ama Soomaaliya lafteeda arrimahaas. Xaqiiqdii, rabshaduhu way sii kordhayeen ilaa faragelinta.
Kenya waxay soo aragtay dhowr hawlgal balaaran oo al-Shabab ah, sida kuwii ka dhacay Westgate Mall 2013, iyo Jaamacadda Gaarisa sanadkii 2015, kaasoo ay ku dhinteen boqolaal rayid ah, iyo sidoo kale tiro badan oo kuwa hoose iyo kuwa dhaawacyada ah. .
Tan iyo bishii Oktoobar, celcelis ahaan laba weerar oo Al-shabaab ah ayaa toddobaad kasta lagu dilay Kenya iyo Soomaaliya. Qeybtii hore ee bishaan kaliya, kooxda hubeysan ayaa weerartay xero militari oo ay adeegsanayeen askarta Kenya iyo kuwa Mareykanka ee ku sugan koonfurta Kenya ka dibna waxay bilaabeen afar weerar kale, halkaas oo ay ku dileen 10 qof oo rayid ah.
Faragelinta ayaa daaha ka rogtay siyaasadaha amniga Kenya, istiraatiijiyad milatari oo ay ku fashilantay iyo awood la’aanta booliiskeeda.
Marka laga soo tago faragalinta militari, Kenya waxay sidoo kale ku lug yeelatay cawaaqib xumada siyaasada gudaha ee Soomaaliya.
Gawaarida ugu weyn ee ku lug lahaanshaha Soomaaliya waa Sheekh Axmed Maxamed Islaam, oo sidoo kale loo yaqaan Madoobe, oo ah sarkaal maleeshiyo Islaami ah oo ka soo jeeda qabiilka Somalida Ogadeeniya.
Madoobe ayaa loo arkaa inuu yahay nin muran badan ka dhex abuuray, isagoo dhinac dhowr jeer ugu rogay dagaallada sokeeye ee Soomaaliya dhowr jeer. Wuxuu qayb ka ahaa kooxo hubaysan oo Islaamiyiin ah oo kala duwan ilaa 1990-meeyadii. Wuxuu la dagaalamay dowlada muqdisho asaga oo gacan saar laleh alshabaab sanado kadibna wuxuu ku luglahaa maliishiyaad loo arko iney taageersanyihiin Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadeeniya (JWXO), koox gooni u goosad ah oo u halgameysay gooni isu taaga somalida bariga itoobiya.
Sanadkii 2007, sanad kadib markii Ethiopia ay ciidamo u dirtay Soomaaliya si ay u taageeraan dowladda ku meel gaarka ah ee ka soo horjeedda kacdoonka islaamiga, Madoobe waxaa ku dhacay duqeyn Mareykan ah waxaana qabsaday Itoobiyaankii, kuwaas oo u soo bandhigay heshiis siyaasadeed. Wuxuu aqbalay inuu ku biiro dawladda ku meel gaarka ah sanadkii 2009, laakiin waxyar kadib markii uu ka tanaasulay jagadiisa cusub iyo maleeshiyadiisa Ras Kamboni waxay ku biireen alshabaab dagaalka ay kula jiraan ciidamada dawlada iyo ciidamada midowga afrika.
Sanadkii 2011, wuxuu jabiyay heshiis kale, markan wuxuu la galay Nairobi, sanadka soo socdana, maliishiyadiisa, oo ay taageerayaan ciidamada Kenya, waxay ku guuleysteen inay al-Shabaab ka saaraan caasimada Jubaland, Kismaayo oo iyana ah magaalo deked istiraatiiji ah.
Labada sano ee soo socota, Madoobe wuxuu maamulay dib-u-heshiisiinta qabaa’ilka, sanadkii 2015, isagoo taageero ka helaya Kenya, waxaa loo doortay madaxweynaha Jubaland. Doorashadii madaxweynenimo ee sanadkii 2019-ka ee dowlad-gobolleedyada, Nairobi ayaa mar kale taageertay murashaxnimadiisa, in kasta oo dowladda Soomaaliya ay ka soo horjeesatay.
Taageerada Kenya ee Madoobe ayaa shaaca ka qaaday in waxaas oo dhan aysan kaliya danaynaynayn in la xakameeyo al-Shabab, laakiin ay tahay in la abuuro “awood raadsi” iyada oo loo marayo Jubaland – warshad dayax gacmeed, oo fog laga maamulo Nairobi.
Taageerada qaldan ee loogu talagalay Jubaland, si kastaba ha noqotee, waa wax qof kasta oo faham asaasi ah u leh dhaqdhaqaaqa Geeska Afrika uu kula talin lahaa ka soo horjeedda. Dowladda jilicsan ee Muqdisho, xoojinta Jubaland waxay la micno tahay daciifnimada awoodeeda.
Dhanka Itoobiya, faragalinta Kenya ee gobolka ay sida aadka ah u deggan yihiin Ogadens, qabiilka ugu weyn ee Soomaalida, oo xubnahoodu ay sidoo kale ku nool yihiin koonfurta Itoobiya isla markaana ay la shaqeeyaan dowladda, ayaa abuuraya xiisad aan loo baahnayn.
Sidaa darteed, Kenya kaliya khatar gelin mayso xiriirka ay la leedahay dowladda Soomaaliya laakiin waxay sidoo kale la tahay Ethiopia, deris iyo awood weyn oo gobol, oo ay la leedahay heshiis gaashaandhig oo qarniyo jirsaday si loo hubiyo xasilloonida gobolka iyo ka hortagga kala-goynta Soomaaliya.
Haddii dembiga asalka ah ee Kenya uu ahaa faragalinta 2011, natiijadiisa dabiiciga ahi waa muranka badaha ee aan loo baahnayn ee lala galo Soomaaliya. Nairobi iyo Muqdisho labaduba waxay sheeganayaan seddex xagal cidhiidhi ah oo qiyaastii 100,000 oo kiiloomitir laba jibbaaran xuduudahooda badweynta Hindiya. Dhulku wuxuu lahaan jiray keyd saliid iyo gaas.
Khilaafka waxaa lagu xallin lahaa si hufan haddii mas’uuliyiinta Kenya ay arrinta si dhab ah u qaataan isla markaana ay u tixgelin lahaayeen dhigooda Soomaaliya tixgalin xushmad leh halkii ay u qaadan lahaayeen in Soomaaliya ay tahay waddan fashilmay oo aan qaadi karin wax difaac ah.
Sidaas darteed, kiisku wuxuu ugu dambeyntii ku dhammaaday Maxkamadda Caddaaladda Caalamiga ah (ICJ), kaas oo sanadkii la soo dhaafay go’aansaday inuu dib u dhigo xukunkiisa illaa 2020 si labada dhinac ay uga sii wada-hadlaan.
Halkii ay saxi lahayd khaladaadkoodii hore, ayay saraakiisha wasaarada arimaha dibada ee Kenya waxay qodeen ciribtirkooda waxayna bilaabeen inay ku mashquulaan dhaqdhaqaaqyo yar yar sida in loo diido masuuliyiinta Soomaaliya inay soo galaan dalka iyo inay dib u soo kiciyaan shirkadihii duulimaadyada ee Wajeer si loo hubiyo amaanka dhammaan duulimaadyada taga iyo kuwa ka yimaada Soomaaliya, iyagoo badalaya petulance. dibloomaasiyadda.
Muddo labaatan sano ah, Soomaaliya waxay Kenya u aragtay inay tahay dhexdhexaadiye dhexdhexaad marka la barbar dhigo Itoobiya oo ay Soomaalidu u diidan tahay faragalinteeda militari ee badan. Khatarta ugu weyn ayaa ah, in aakhirka, faragelinta iyo faragelinta Kenya ee arrimaha gudaha ee Soomaaliya, oo ay weheliso is-afgaranwaaga ay ka timaado isu-soo-baxyada iyo jahwareerka, ay dhaawici karto xiriirka Kenya iyo Soomaaliya.
Tani waxay sidoo kale wiiqi doontaa awoodda iyo awoodda dowladda federaalka Soomaaliya ay u maareynayso dalka, gaar ahaan haddii ciidamada AMISOM ay baxaan sida loo qorsheeyay Diseembar 2020.
Guul darada goos gooskan iyo diblomaasiyadda aan xisaabtanka lahayn waxay noqon doontaa al-Shabab, kaas oo sii wadi doona inuu ku raaxeysto boos ku filan oo weerarro ah uu ka fuliyo Kenya iyo gudaha Soomaaliya. Guul darada ugu dambaysa waxay noqon doontaa dadka Soomaaliyeed ee soo kabtay labaatan sano oo colaado ah.